7 ruux oo ku dhintay qarax ka dhacay Boosaaso iyo Puntland oo ku eedaysay Al-shabaab (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 5, 2013 4:03 b 0
Boosaaso, December 5, 2013 – Khasaaraha qaraxii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa sii kordhaya, waxaana tirada dhimashadu gaartay 7 ruux, dhaawaca ayaa isna maraya in ka badan 30 ruux, sida ay wararku sheegayaan.
Qaraxa oo ahaa mid lala eegtay saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa ka dhacay jidka Daaru-salam ee Boosaaso, halkaas oo ah meel aad u mashquul badan, dadka dhintay ayaa u badan ganacsato goobta joogtay.
Nooca qaraxa ayaa lagu tilmaamay is miidaamin.
Taliyaha ciidamada badda Puntland Gen. Cabdirisaaq Diiriye oo la hadlay radio daljir ayaa weerarka ku eedeyey kooxda Al-shabaab, waxaase uu ka gaabsaday in uu faah-faahin dheer ka bixiyo askarta kaga dhimatay weerarkaas ciidankooda.
Gen. Diiriye ayaa xusay in dadka ugu badan ee qaraxa wax ku noqday ay yihiin rayid ku mashquulsanaa howlahooda.
Dhaawaca oo aad u fara badan ayaa haatan lagu dabiibayaa goobaha ganacsiga waa wayn ee magaalada Boosaaso iyo cisbitalka wayn, ciidamo ka tirsan PMPF ayaa ku dhawaacmay weerarka maanta welise lama xaqiijin tirada askarta kudhimatay iyo inta dhaawucu ka soo gaaray.
Kooxda Al-shabaab kama aysan hadlin weerarka ka dhacay Boosaaso ee iyaga lagu eedeyey.
Dhegeyso:- Maxamuud Cabdi oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Gen. Cabdirisaaq diiriye